EAC660 SMB Smart Ikuku Access njikwa
EAC660 bụ onye njikwa nnweta amamịghe (AC) nke Yunke China Information Technology Limited (nke a na-akpọ DCN) maka netwọ ikuku SMB na ngalaba nnukwu ụlọ ọrụ. Ọ nwere ike ijikọta ya na DCN smart EAP series wireless access points (AP) iji mepụta ihe ngwọta LAN (WLAN) na-ejikọtaghị ọnụ. EAC660 na-akwado 4 * GbE Combo (SFP / RJ45), ọdụ ụgbọ mmiri 12 * 1000M SFP na ọdụ ụgbọ mmiri 4 * 10GbE SFP + maka uplink. Ọ nwere ike ijikwa ruo 260 smart wireless AP. Ngwaọrụ na-enye ike WLAN acce ...